बेलबारी नगरपालिका Archives - Purbeli News
बेलबारी नगरपालिकामा ८ करोड ५३ लाख ६८ हजार बेरुजु : नियमबिपरित सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलबभत्ता (प्रमाणसहित)
बेलबारी । मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा नियमबिपरित कर्मचारी नियुक्ति र तलबभत्ता शिर्षकमा ८ करोड ५३ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ मा सो बेरुजु देखाईएको छ । प्रतिबेदनमा नगरपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने रु. १ करोड २ लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ४ करोड २३ लाख ३२ ह...
बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकाले लोपोन्मुख नौमती बाजा संरक्षण गर्न थालेको छ । बाजालाई लोप हुन नदिनका लागि नगरपालिकाले खरिद गरेर परिवार सेवा समाज बेलबारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सोमवार नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले परिवार सेवा समाज बेलबारीलाई नौमती बाजा तथा कपडा हस्तान्तरण गरेका छन । बाजा सञ्चालनका माध्यमबाट रोजगारीको सुजना गर्ने, युवा पुस्तालाई...
बेलबारी । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले किसानलाई मिनिटिलर बितरण गरेको छ । कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्दै कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उद्धेश्यले कृषक तथा समुहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा औजार बितरण गरिएको हो । बेलबारी नगरपालिकाको ५० प्रतिशत र कृषकको ५० प्रतिशत साझेदारीमा नगरभित्रका १४ जना किसानलाई मिनिटिलर बितरण गरीएको छ । परम्परागत ख...
बेलबारी । बेलबारीमा पहिलोपटक एकजना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन । दिल्लीबाट असार ९ गते आएर क्वारेन्टाईनमा बसेका बेलबारी ५ का २२ बर्षिया युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । क्वारेन्टाईनमा रहेको १८ जनाको स्वाव संकलन गरि परिक्षणका लागि पठाईएकोमा १ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले जानकारी दिईन । ति युवालाई क...